कर्णालीको पीडा बन्दै प्राकृतिक विपद् - Online Majdoor
सुर्खेत, ३ माघ । प्राकृतिक विपत्तिबाट यस वर्ष कर्णालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरी र आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्बाट चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो चौमासिकमा ठूलो धनजनको क्षति भएको पाइएको हो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिनामा बाढी, पहिरो, हावाहुरी र आगलागीबाट गरी रु. १८ करोड २५ लाख बराबर धनजनको क्षति भएको छ । विपत्बाट साउन महिनामा रु. आठ करोड ४९ लाख तीन हजार ६८४ बराबरका धनजनको क्षति भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका सहप्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी भदौमा रु. छ करोड ७१ लाख ६२ हजार ३०, असोजमा रु. दुई करोड ५१ लाख ९१ हजार ३०० र कार्तिकमा रु. ११ लाख ९० हजार ३०० बराबरको धनजनको क्षति भएको सहप्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । “गत साउन र भदौमा पहिरो र बाढीबाट धनजनको ठूलो क्षति भयो, यद्यपि थप क्षति हुनबाट कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको भूमिका राम्रो रह्यो ।” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दिएको जानकारीअनुसार कर्णालीमा सबैभन्दा बढी क्षति क्रमशः पहिरो, आगलागी र बाढीबाट भएको पाइएको छ । चालू आवको चार महिनाको अवधिमा पहिरोबाट रु. १० करोड ६० लाख ५१ हजार २८४, आगलागीबाट रु. चार करोड ३७ लाख ९१ हजार ६३९ र बाढीबाट रु. एक करोड ८२ लाख ९१ हजार ९३१ बराबर जनधनको क्षति भएको छ ।
हावाहुरीले भने यस प्रदेशमा रु. आठ लाख र चट्याङले सबैभन्दा कम रु. एक लाख दुई हजार ६०० बराबर जनधनको क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अभिलेखमा छ । त्यस्तै प्राकृतिक विपत्तिले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी हुम्ला जिल्लामा क्षति पु¥याएको छ । पहिरो र आगलागीका कारण हुम्लामा रु. पाँच करोड ४४ लाख ९४ हजार १६० बराबर धनजनको क्षति भएको प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिराको जोखिमका हिसाबले दोस्रोमा दैलेख रहेको छ । यो वर्षको पहिलो चौमासिकमा दैलेखमा पहिरोकै कारण रु. चार करोड १२ लाख १६ हजार ९०० को जनधन क्षति भएको छ । सुर्खेत भने बाढी र आगलागीको चपेटामा परेको छ । ती दुवै विपत्तिबाट सुर्खेतले रु. तीन करोड ४८ लाख दुई हजार ५०० बराबरको जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।”
बाढी, पहिरो, आगलागी हावाहुरी, चट्याङजस्ता विपत्तिबाट जाजरकोटले रु. एक करोड ९३ लाख सात हजार २५०, जुम्लाले रु. एक करोड ४० लाख ५८ हजार १००, कालीकोटले रु. ७८ लाख ३६ हजार ४३४, सल्यानले रु. ३२ लाख ८२ हजार १३१, मुगुले रु. २९ लाख ४२ हजार २०० र सबैभन्दा कम डोल्पाले रु. १७ लाख ४२ हजार २०० बराबरको जनधनको क्षति व्यहोरेको छन् ।
साउनमा २२ वटा विपत्तिका घटना हुँदा ३७६ घर क्षति भएका छन् । त्यसबाट १९ महिला र १८ पुरुष गरी ३७ जनाको मृत्यु, पाँच जना बेपत्ता, ३१ घाइते, एक हजार ४१३ परिवार विस्थापित र २१२ पशुचौपायाको मृत्यु भएको छ । भदौमा २१ विपत्तिका घटनाबाट ३४३ घर क्षति, १४ पुरुष र छ महिला गरी २० जनाको मृत्यु, चार बेपत्ता, १७ घाइते, ५८८ परिवार विस्थापित र ३०३ पशुचौपायाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै असोजमा १३ विपत्तिका घटना घट्दा एक जना घाइते, ४५ परिवार विस्थापित तथा कार्तिकमा छ विपत्तिका घटनाबाट १६ घर क्षति, दुई महिला एक पुरुष गरी तीन जना मान्छे र तीन पशु चौपायाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पहिरो, बाढी र आगलागीका कारण कालीकोटले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भोग्नुप¥यो ।
यो चार महिनाको अवधिमा विपत्तिका कारण कालीकोट जिल्लामा २३ महिला र २१ पुरुष गरी ४४ जनाले ज्यान गुमाए भने सात जना अझै बेपत्ता रहेका छन् । बाँकी मृत्यु हुनेमा अन्य जिल्लाका नागरिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । भूगर्भविद्हरूले यसअघिदेखि नै कर्णाली तथा तिला नदी किनारमा रहेका बस्ती उठाएर सहजमा ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अन्यथा ठूला घटना घट्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयको यस वर्षको तथ्याङ्कले जुम्ला कर्णाली प्रदेशमै हावाहुरी, हिमपहिरो, बाढी र पहिराको जोखिममुक्त जिल्लाका रूपमा देखिएका छ । आगलागीका घटना भने जुम्लामा पटकपटक हुँदै आएका छन् । डोल्पा जिल्ला पहिरोबाहेक अन्य जोखिममुक्त नै रहेको पाइएको छ ।
सहप्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कर्णालीका सबै जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहमा आगलागी हुँदा घटनास्थलमा न सजिलै दमकल जाने बाटो छ न त प्राकृतिक विपत्तिमा आवश्यक तालिम प्राप्त जनशक्ति नै । कठिन भूगोल, आवश्यक उपकरण र जनशक्ति अभावले पनि बेलैमा उद्धार तथा राहतका कार्य हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँको समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले समयमै पहल गर्नुपर्ने कुरा सुनाउनुभयो । रासस